Hospital Playlist – Gold Channel Movies
2Season2Jun. 17, 2021
Episode3Jul. 01, 2021
Episode5Jul. 15, 2021
Hospital Playlist ( 슬기로운 의사생활)
ဒီတစ်ခါတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးတွေ စောင့်မျှော်နေတဲ့ Hospital Playlist(S 2) ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကားလေးကတော့ အကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ သံယောဇဉ်တွေ၊ နွေးထွေးမှုတွေ မေတ္တာတရားတွေကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်မယ့်ကားလေးပါ။ လူ့ဘဝရဲ့ ငိုရ၊ ရယ်ရ၊ မောရတဲ့ အဖြစ်တွေကို သဘာဝဆန်ဆန်ကြည့်ရမယ့် ကားပါ။ ဒီကားလေးကို ကြည့်ရင် ငိုရင်းနဲ့ကို ရင်ထဲမှာ နွေးထွေးမှုအပြည့်ခံစားရမှာပါ။
အကျင့်စရိုက်မတူတဲ့ သူငယ်ချင်းငါးယောက်ဟာ ကျောင်းသားဘဝကနေ ဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အထိ မခွဲအတူ တတွဲတွဲပါပဲ။ အမြဲတမ်းနောက်ပြောင်နေတတ်တဲ့ ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်၊ လူနာတွေအပေါ်ရော ဂျူနီယာတွေအပေါ်ပါ နွေးထွေးလွန်းတဲ့ ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောအထူးကု ၊ လူနာတွေကို သွေးသားရင်းလို စောင့်ရှောက်ပြီး တစ်ခုခုဆို ငိုလွယ်တဲ့ ကလေးခွဲစိတ်အထူးကု၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးထင်ရပေမဲ့ မိခင်တွေရဲ့စိတ်ကို ကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့ သားဖွားမီးယပ်အထူးကု၊ လုံးဝကို ဘုကလန့်ပေမဲ့ တကယ်တော့ နွေးထွေးပြီးလူနာတွေကို ဂရုစိုက်လွန်းတဲ့ နှလုံးအထူးကု။ ဒီဆရာဝန်ငါးဦးရဲ့ဘဝလေးတွေကို အကောင်းဆုံးထင်ဟပ်ပြသထားတဲ့ ကားလေးပါ။
S1 မှာ အဆုံးမသတ်ခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝလေးတွေရဲ့ဇာတ်လမ်းကို S2 မှာ ဘယ်လိုတွေဖော်ပြသွားမလဲ။ S2 မှာရော လူ့ဘဝရဲ့ရသအဖြာဖြာကို ဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ထားမလဲ၊ ဘယ်လိုဇာတ်ဝင်သီချင်းတွေနဲ့ ကြည့်ရှုသူကိုဖျော်ဖြေဦးမလဲဆိုတာကို Gold Channel နဲ့အတူ ခံစားကြည့်ရှုပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။
Areum XuJuly 22, 2021Reply
Season 1 လေးပြန်တင်ပေးပါလား GC ကဘာသာပြန်တာကလွဲလို့ မကြည့်တတ်လို့ပါ 😥
lone loneJuly 12, 2021Reply
season 1 lay ll tin pay pr naw
The fiery priest kdramaလေးတင်ပေးပါလား
SarahJune 18, 2021Reply
Season 1 lay ll pyan tin pay par lar hin…
HaruJune 18, 2021Reply
Season 1လေးလည်းတင်ပေးပါလားဟင် မင်မင်